Umdaka | UMaxwell
Iidayi, ezisetyenziselwa ukwenza imibala yefibre okanye ezinye izinto, zahlulahlulwe zaba zimbini iintlobo-zedayi yendalo kunye needayi zokwenziwa, kubandakanya idayi esebenzayo, idayi yedal, idayi yesalfure, idayi yephthalocyanine, amadayi e-oxidation, amadayi e-condensation, amadayi okusasazeka njl njl.
Inguluzi sisixhobo seyumgubo onombala kunye nomthamo wokugubungela, ongenakunyibilikiswa kodwa umiselwe emanzini, igrisi, i-resin, i-solvent solvent kunye nokunye. Umdibaniso weqela uxutywe ngokombala we-inorganic kunye ne-organic pigment. I-pigment ye-inorganic yahlulahlulwe i-oxide, i-chromate, i-sulfate, i-silrate, i-borated, i-molybdate, i-phosphate, i-vanadate, i-cyanates yensimbi, i-hydroxide, isulfide,
I-Metal, njl njl. Kwaye i-organic pigment yahlulwe yangamabala e-azo, i-phthalocyanine pigment, i-anthraquinone pigment, i-pigment ye-indigo, i-Quinacridone pigments, iiPolcyclic Pigments ezifana ne-oxazine-ⅡI-Fang methane pigions njl ngokokwakhiwa kwazo kweekhemikhali .;
Umzi mveliso ubonelela ngezixhobo kunye neenkonzo zeprojekthi ye Turnkey zedayi kunye nemveliso yokuvelisa i-pigment .;
Sinikezela ngemveliso yonke yezityalo, inkonzo yoyilo lobunjineli, ukuvuselelwa komzi-mveliso, iinkonzo zokwandiswa, iinkonzo zokubonelela ngolawulo lweprojekthi, iinkonzo zoyilo ukusombulula ubunzima kumdaka nakwimveliso ye-pigment ngokupheleleyo.
Ezona zixhobo ziphambili kunye nomsebenzi wokwazisa
Isinambuzane: Isetyenziselwa ukuxuba umgubo kunye nomgubo, umgubo oxutywe nenani elincinci lolwelo. Ukuhlawula ulwelo, uMzi mveliso uyile indlela efanelekileyo yokutshiza yokulinganisa ukuphucula ukusebenza komxube kunye nokufana; Umxube uneenkcukacha ezichaziweyo ezibandakanya elebhu kunye nezixhobo zohlobo lokuvelisa. Iintlobo ngeentlobo, kubandakanya imveliso emininzi ehlanganisiweyo enje ngokudibeneyo nangaphezulu. Unokukhetha owona mshini ufanelekileyo ngokwenkqubo yokuvelisa kunye neepropathi zezinto.
Umphengululi: Kubandakanya ukudluliswa kwe-pneumatic (uxinzelelo olululo, uxinzelelo olubi, inqanaba elinobunzima kunye nesigaba sokudambisa) kunye nokuhambisa umatshini (isikulufa, ibhakethi, itsheyini kunye nebhanti)
Umatshini wokuva: Ukubandakanya i-sary ejikelezayo ye-vibrate, i-sving ye-airfish, imigaqo eyahlukeneyo iyafumaneka.
Umatshini wokupakisha: uquka ibhegi yevali kunye nomatshini wokuvula upakisha umthwalo ongaphezulu. Ngokusekwe kuluhlu lokugcwalisa, lahlulahlulwe laya kufikelela kwi-5kg, ukuya kuthi ga kwi-50 kg kunye nokufakwa kwithoni ebhegi.
Isisasazi: ukulungiselela ukusasaza i-pigment. Iindidi ezahlukeneyo kunye nokucaciswa kuyakhethwa kubandakanya ukuSasaza nge-scraper, uhlobo lwe-Vacuum Diserser, i-Dual-shaft Diserser ene-Butterfly agitator, uhlobo lwePlatform Disaser njl. Ziyafumaneka ukuhlangabezana neendlela ezahlukeneyo zokusasaza.
I-Emulsifier ephezulu ye-shear: esetyenziselwa ukusasaza i-pigment, homogenizing, i-emulsifying and Refresh, yahlulahlulwe yangumdidi we-batch kunye nohlobo lwe-inline; uhlobo lwe-emulsifier ye-batch inokuthi yenziwe ibe ngohlobo lwe-kettle efakwe kulungelelwaniso nodidi lwee-agitators ukufezekisa umatshini omnye onemisebenzi emininzi; i-emulsifier iyakwazi noyilwa ngohlobo lwe-vacuum, ekhoyo ukulungiselela ukufudumeza kunye nezinye iintlobo ezininzi ngokweemfuno ezahlukeneyo zenkqubo yokuvelisa.
IBasket Mill: Uhlobo lwesixhobo sokugaya esimanzi, sidibanisa ukusasaza kunye nokugraya iinkqubo ezimbini kumatshini omnye. Iyanciphisa inkqubo yemveliso kwaye ngaphandle kwempompo okanye iveni, oko kuphucula ukusebenza kwemveliso kwaye kunciphise inkunkuma. Ngaphandle koko, kulula ukucoca, nto leyo ebangela ukuba zilungele iimfuno zemveliso yeentlobo ezininzi zeemveliso kumthamo omncinci .;
Imigca yeebhulukhwe ezithe tye: Umatshini wokugaya omanzi osetyenziselwa ukugaya i-pigment ngeemfuno zokugqibela zokugqibela. Kuyinto ngesiphumo esihle kakhulu sokugrumba kunye nokusebenza okuphezulu. Yeyona mishini isetyenziswa kakhulu yokugaya kwimakethi kubandakanywa nohlobo lweDiski oluGqibeleleyo lobuhlalu uMgidi kunye naloo Mjikelo ojikeleze ubuhlalu obuMil.
Umgca uphela ungangumdibaniso womatshini omnye okanye umatshini ozenzekelayo wokuvelisa kunye nobuchwephesha bemveliso obuphambili kubandakanya inkqubo yokondla izixhobo, inkqubo yokulinganisa, inkqubo yokusasazeka kunye nenkqubo yokuxubha, inkqubo yokucoca, inkqubo yokulawula oluzenzekelayo, inkqubo yokuzalisa ngokuzenzekelayo njl. ngokusekwe kudidi lwe-pigment kunye neemfuno zemveliso.